Inay Diyaar Yihiin & Wararka Ku Saabsan Shirka Jaraa’id Ee Macalinka PSG Ka Hor Kulanka Real » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Inay Diyaar Yihiin & Wararka Ku Saabsan Shirka Jaraa’id Ee Macalinka PSG Ka Hor Kulanka Real
Xasuusta guul daradii Barcelona ay gaarsiisay PSG, taasoo 6-1 ahayd, waxay kooxda reer France ay ku qasabtay inay si fiican oo ka duwan siidii hore ay isugu diyaariso safarka Real, macalinkeeda Unai Emery ayaa sidaas sheegay.
Inkastoo ay adag tahay inay guul ay kusoo qaataan PSG, garoonka Estadio Santiago Bernabeu, sida ay Camp Nou, ugu soo gaareen lugtii hore, hadana Emery ayaa wuxuu yahay mid rajo wanagasan leh.
“Diyaar-garowgeena wuxuu bilowday kadib kulankii Camp Nou, wax yar ayaan wada hadalnay, laakiin shaqo badan ayaan qabanay,” ayuu ka sheegay Emery, shir Jaraa’id oo lasoo abaabulay.
“Guud ahaan si ka fiican xili ciyaareedkii hore ayaan isugu diyaarinayaa, heer ka duwan ayaana ku jirnaa.
“Waxaan qorsheenayaa inaan sameeyo shaxdii ugu fiicneed oo aan ku wajaho Real Madrid, maxaa yeela iyaguba, sidaas ayaan hubaa inay sameyn doonan
“Ma qiyaasi karo, inay BBC kusoo bilaabi doonaa shaxda koowaad.
“Waa run inay isbedalo dhanka shaxda ay sameyn doonaa, laakiin aniga waa inaan helnaa dookhyo aan uga hortegi karno Baasaskodooda.
PSG, waxaa saaran cadaadis si ay uxaqiijisato Champions League, maadaama ay qarash gareeyeen dhaqaalo badan, kaasoo uu kamid yahay saxiixa aduunka ugu qaalisan ee Neymar, kaasoo ay sameeyeen xagaagii hore.
“Waxaan qabnaa kalsooni badan waxaana heli karnaa Faa’ido, waana ku noolaan karnaa meel walba iyo waqti kasta, fursad weyn ayaana haysanaa.
“Waxaan ka fog nahay wax walba oo adag, waana wajahi karnaa kulankaan, aniga waxaan ahay mid ku dhiiran muuqaal ciyaareedka wanaagsan ee PSG.
Ugu dambeyn, mar uu ka hadlay kasoo tegistiisa Thiago Motta, kaasoo khadka dhexe ka dheela, ayaa wuxuu sheegay inay heli karaan bedalkiisa, isagoona tusaale ahaan usoo qaatay Adrien Rabiot iyo Lo Celso.
Champions League Real Madrid vs PSG Unai Emery